Isengezo ku- Google Sheets - Amamethrikhi Ads
clever ads Ngena ngemvume nge-Google
Mahhala inthanethi ukukhangisa amathuluzi
Dala Google Ads ngokuphazima kweso.
Thola amagama angukhiye afanele wezikhangiso zakho ze- Google Ads .
Hlola futhi uthuthukise imikhankaso Google Ads
Dala ads ezibhengeziwe zemikhankaso yakho yokubonisa.
Google Ads zakho ze-Google zihunyushwe ngokuzenzakalela kunoma yiluphi ulimi.
Ukuhlanganiswa ukukhangisa ku-intanethi
Ikhodi ye- Google Ads
Faka ikhodi yethu yokukhushulwa bese uthola isikweletu Google Ads
Ukuhlanganiswa Microsoft Teams
ads zakho ze-PPC kumaqembu e- Microsoft Teams .
Imenenja Clever Ads
Buka, qhathanisa futhi uthuthukise ads kusuka kudivayisi yakho yeselula.
Digital Uguquko Pack
Dala iwebhusayithi yakho kusuka ekuqaleni bese uqale ukukhangisa mahhala.
ads zakho ze-PPC ku- Slack .
Faka ku- Google Sheets
Letha idatha yakho yokukhangisa ye-PPC ku- Google Sheets .
ads zakho ze-PPC ku-Google Chat.
Ube amathuluzi ukukhangisa ejensi.
Ngena ngemvume nge-Google
Clever Ads ku- Google Sheets : Onke amamethrikhi wakho wezikhangiso aku-inthanethi ayalawulwa.
Thola kalula imininingwane eningiliziwe mayelana nemininingwane yakho yokumaketha mahhala nge- Google Sheets angeziwe nge- Clever Ads . Ukuphela kokufanele ukwenze ukukhetha umthombo wakho wedatha futhi sizowufaka wonke ku- Google Sheets futhi sikudalele izifinyezo zedatha!
Clever Ads ku- Google Sheets , ungathola kalula ulwazi olunemininingwane mayelana Nemininingwane Yakho Yokumaketha mahhala.
Khetha umthombo wakho idatha
Khetha ku-Google, Facebook, noma ku-Microsoft Ads . Sizobonisa idatha yakho ku- Google Sheets ukudala izifinyezo zemethrikhi yakho yokukhangisa eku-inthanethi.
Thola imibiko olunembile
Hlola kalula amamethrikhi nedatha yakho ebaluleke kakhulu, ehlelwe kahle kusipredishithi sakho Clever Ads ngezifiso Clever Ads .
Yenza izinqumo clever
Thola imininingwane nemibiko kuwo wonke amazinga (imikhankaso, ads , amagama angukhiye, imibuzo yosesho, amazwe, njll.) Bese wenza izinqumo ezinolwazi ngecebo lakho.
INDLELA ELULA KAKHULU YOKULETHA IMETRIKI ZAKHO ZOKUKHANGISA KWI-GOOGLE SPRE ADS HEETET
YIBA kangcono marketer &amp; ADVERTISER NE CLEVER ADS ADD-KU GOOGLE SHEETS
Valelisa ukukopisha / unamathisele.
Ukushintsha PPC yakho ukudluliswa kwedatha kanye gxila kulokho okubalulekile ngempela.
Hlanza futhi enembile.
Sebenza nge idatha ihlanzekile lokho isikulungele ukuba sihlaziye kalula shazi.
Thola amamethrikhi kwesokudla.
I amamethrikhi udinga ukwenza izinqumo ezifanele konke endaweni eyodwa.
Finyelela imibiko khulula.
Thola ukuthi yini futhi ayisebenzi ukukhangisa yakho ngokushesha futhi mahhala.
Ukuchitha isikhathi esingaphansi ukuqoqa idatha futhi zinike isikhathi esengeziwe ukucabanga.
Thola imiphumela engcono ukukhangisa.
Ukuba ulwazi olulungile le ads ukuze izinqumo ezingcono - futhi imiphumela engcono.
Kwenziwe uthando Clever Ads , uNdunankulu weGoogle
NjengoNdunankulu we-Google Partner onamakhasimende angaphezu kwe-150,000, qiniseka ukuthi inqubo iphephile futhi ivikelekile nge-100%.
UFUNA NGCONO IMIPHUMELA KUSUKELA ONLINE YAKHO NOKUKHANGISA ISU?
Ngabe unenkinga ngokusebenzisa le Slack Integration?
Ungaxhumana nathi ngokuthumela i-imeyili ku- assistant@cleverads.com noma ngokumane ugcwalise ifomu elilandelayo:
Ngiyabonga! Sithole umlayezo wakho!
Hawu! Kukhona okungahambanga kahle. Ngicela uzame futhi.
Funda kabanzi mayelana Clever Ads Google Sheets ... Thola wonke amamethrikhi wakho alawulwa!
Funda kabanzi mayelana Google Sheets nezici zayo. Hlanganisa yonke idatha yakho ebalulekile namamethrikhi ku- Google Sheets ukuze kunganakwa lutho.
Izici, izinzuzo kanye nezinzuzo
Yini ongayenza nge- Clever Ads Google Sheets Add-on?
Isengezo sethu se- Google Sheets nge- Clever Ads sikunikeza ithuluzi lamahhala, elizenzakalelayo ngokuphelele elenzelwe ukuba nedatha, amamethrikhi namagrafu owakhetha kumapulatifomu wakho wokukhangisa owathandayo ngqo kumaSpredishithi e-Google.
Nale isengezo, ukusebenzisana, ukubika izethulo kanye ukuthumela idatha ku-osebenza nabo kuyoba lula kakhulu!
Gcina isikhathi nomzamo wokwenza kanjalo!
Ngakho konke lokhu uzokwazi ukugcina izinto ezimbili ezibaluleke kakhulu kulezi zinsuku, umzamo wakho nesikhathi sakho, futhi uyazi ukuthi bathini .... Isikhathi yimali! Nge- Google Sheets asuka Clever Ads ungayeka ukukopisha idatha ngayinye kusuka Google Ads ukuze ube yimibhalo eyisicefe noma imibhalo yokwethula. Manje usungatshala lesi sikhathi esibalulekile kulokho okubaluleke kakhulu: izinhloso zakho, amakhasimende akho nawe. Esikufunayo, ngemuva kwakho konke, ukuthi unesikhathi sokujabulela lelo khofi lasekuseni likhululekile futhi ungajahile. Nciphisa ukucindezeleka kwakho ngokonga isikhathi bese ukhohlwa ikhophi eyisicefe nokunamathisela okungathi ngezinye izikhathi nakho kusiholele emaphutheni.
Umsebenzi wakho esebenza kahle kakhulu kangakanani
Ngenxa yalokho, umsebenzi wakho noweqembu lakho uzosebenza kangcono kakhulu, ngoba, njengoba sisho, uzoshiya eceleni ikhophi bese unamathisela futhi uzokwengeza imibiko yakho ... Ngokuphazima kweso! Ukusebenza kahle nokukhiqiza yizilinganiso zokusebenzisa le- Google Sheets Add-on kusuka ku- Clever Ads , lezi yizinhloso ezimbili ozozifeza uma uyifaka manje. Ulindeni?
Ungakuthola kanjani okuningi ku-Add-on Google Sheets Clever Ads
Wonke amamethrikhi yakho, idatha namashadi endaweni eyodwa
Kulula kakhulu ukusebenzisa, emva kwamaminithi ambalwa ungathla ezinemininingwane futhi egcizelele imibiko ukwenza okungcono futhi bayiziphukuphuku ukumaketha, isabelo sezimali izinqumo.
Vele ukhethe umthombo wakho wedatha phakathi kwe-Google, i-Facebook noma i-Microsoft Ads , bese sinakekela konke okunye. Esizokwenza ukuhlela yonke le datha ku- Google Sheets ukudala izifinyezo nemibiko ehlakaniphile yemethrikhi yakho yokukhangisa eku-inthanethi. Ukwenza izinqumo ngemikhankaso yakho akukaze kube lula kangako!
Okuningiliziwe kanye nokwaziswa umsebenzi
Clever Ads Google Sheets , uma usukhethe umthombo wakho wedatha, uzokwazi ukuhlola kalula futhi ngokushesha futhi uhlaziye amamethrikhi nedatha yakho ebaluleke kakhulu, ozoyithola ihlanzekile futhi yenziwe ngezifiso njengoba ufisa Google Ads Spreadsheets. ukulungele ukuthumela, ukulanda ... Noma kuze kube manje kubaphathi bakho!
Kungani ukhetha Google Sheets kusuka ku- Clever Ads
Premier-Google Partner Isiqinisekiso
Siyaziqhenya ukuba-Google Premier-Partner, yohlelo lokwethembeka-Google, oqinisekisa ukuthi le nqubo 100% uvikelekile. Ngeke ukufinyelela noma sebenzisa ama-metric akho yini, sizobe kuphela abaveza kuwe inqubo yethu IA ukuze ukwazi ukuzisebenzisa njengoba ubona kufanelekile. Sihlonipha ubumfihlo bakho 100%, ezingaphezu kuka izinkampani 150.000 kakade usithemba ukuba abasize imikhankaso yabo ukumaketha inthanethi ... Futhi sithola imiphumela emihle kakhulu!
Ngabe sesivele sishilo ukuthi i- Clever Ads Google Sheets Add-on imahhala ngokuphelele? Ukusebenzisa isengezo se-Google Spreadsheet ngeke kukubizele ngisho indibilishi. Uzoba nawo wonke amamethrikhi wakho we-Google, Facebook, noma we-Microsoft Ads (noma wonke) ahlelwe ku-Google Spreadsheet ngaphandle kwezindleko futhi ugcine imizamo yakho nesikhathi sakho - ungafaki imali yakho noma isikhathi sakho ngokungenangqondo!
Indlela elula futhi ezingabizi kakhulu indlela umsebenzi ithimba
Ngakho-ke futhi ekuphetheni, njengoba ubona, ukufaka i- Google Sheets kukulethela izinzuzo nezinzuzo kuphela. Sincoma futhi ukuthi ubheke amanye amathuluzi wethu amahhala, angakusiza ngakho konke okuphathelene namasu akho wokukhangisa nemikhankaso yakho: umcwaningi mabhuku wemikhankaso ekhokhelwayo, umhleli wamagama asemqoka wecebo lakho le-SEO, uhlelo lwethu lokusebenza lweselula ukuthi lube nakho konke idivayisi yakho ephaketheni, ukuhlanganiswa nezingxoxo ezidume kakhulu emakethe ... Futhi okuningi okuningi! Bheka iwebhusayithi yethu bese uthola konke okufanele sikunikeze.
Ukuhlanganiswa Slack , Microsoft Teams , ne- Google Chat
Setha kuwumkhuba wakho izaziso futhi wamukele nabo ingxoxo olisebenzisa okuyo, ukwamukela amagrafu namamethrikhi ukhetha mayelana nokusebenza yokukhangisa-akhawunti akho ku-intanethi.
Umdali Womkhankaso Wezikhangiso Google Ads
Acwaninge imikhankaso yakho futhi ungadala amasha mahhala zonke izidingo-Google futhi kuqinise yokuthengisa yakho.
Planner elingukhiye ngoba isu lakho SEO
Amandla SEO yakho isu ngokufuna angukhiye kakhulu afanele imikhiqizo yakho noma amasevisi, thola angukhiye kangcono imikhankaso yakho.
Mahhala Banner Maker for Google Display
Dala, Google Sheets , mahhala, amaphakethe amabhanela alungele ukusetshenziswa emikhankaso yakho yesikhangiso se-Google Display ... Ngemizuzwana nje!
Ikhodi yephromo yemikhankaso Google Ads
Finyelela kubathengi abasha noma uqale yakho Google Ads uhambo nale khulula $ 150 isigqebhezana ukuchitha ku imikhankaso yakho ku-intanethi isikhangiso. Amamethrikhi ale mikhankaso azoboniswa ku- Google Sheets uma ulanda isengezo sethu se- Google Sheets . Qala ukukhangisa njenge-PRO ngekhodi yokukhangisa ye- Clever Ads
Clever Ads App for omakhalekhukhwini
Ngokungeziwe ekubeni nawo wonke amamethrikhi wakho wokukhangisa ku- Google Sheets ane- Google Sheets ... Ingabe ufuna ukuba nalo lonke lolu lwazi kuselula yakho? Ngohlelo lwethu Clever Ads Manager ungabeka i-Facebook yakho, i-Twitter, i-Instagram, i-Microsoft, ne-Google metrics yesikhangiso ... Kwiphaneli yokulawula kumakhalekhukhwini wakho! Yonke imininingwane yakho yokukhangisa eku-inthanethi isondele kakhulu kunangaphambili, ephaketheni lakho.
Zonke amathuluzi ethu ihlanganiswe uzokwenza ibhizinisi lakho ku-intanethi ukuthuthukisa uqobo kahle, mahhala ... Futhi ukuthuthukisa imiphumela yakho! Khulisa yokuthengisa zakho futhi ukhulise ibhizinisi lakho nge digitalization yethu iphakethe e izinyathelo ezimbili nje, ukuklama iwebhusayithi kalula futhi ngokushesha, esikhathini esingaphansi kosuku, ne khulula Umakhi zethu inthanethi, futhi uqale ukukhangisa inthanethi bese edonsa traffic, yokuthengisa, futhi amakhasimende abaqotho.
Online futhi ngezifiso ukweseka
Ngabe usangabaza ngakho? Uke wahlangabezana nanoma iyiphi inkinga ngokusebenzisa isengezo sethu se- Google Sheets noma amanye amathuluzi ethu? Ungakhathazeki, silapha ukukusiza, sineqembu lochwepheshe bezentengiso abakulungele ukuphendula yonke imibuzo yakho. Sithumele i-imeyili kumsizi @ cleverads .com.
Clever Ads zisebenzisa ubuchwepheshe obunjengamakhukhi ukuze uthuthukise ulwazi lwakho, ukwenza okuqukethwe kube ngokwakho kanye nezikhangiso, ukuhlinzeka ngezinto zokuxhumana, kanye nokuhlaziya ithrafikhi yethu. Qhafaza ngezansi ukuze uvume ukusetshenziswa kwalobu buchwepheshe kuwebhusayithi yethu - futhi ungakhathazeki, siyakuhlonipha ubumfihlo bakho.
ezokuhweba ngekhompuyutha nokuhlanganisa
Clever Ads Google Partner eziqhoshayo
Kwenziwe Ngothando Clever Ads - 2021